(Last Nohavaozina: 17/07/2020)
Ny fitsangatsanganana lamasinina dia tena mety ary fomba Eco-Friendly amin'ny fitsangatsanganana. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Taratasy fiaran-dalamby mora indrindra Tranonkala eto amin'izao tontolo izao.
Roma dia tanàna lehibe hitsidika any Eropa ho an'ireo mpivahiny zokiolona. Ny tanàna fahiny any Roma, ankamaroan'ireo atahorana, trano fandraisam-bahiny, ary trano fisakafoanana dia azo alaina tanteraka ho an'ny be taona amin'ny seza misy kodiarana. Midika izany fa ny sisin'ny sisin-tanàna dia samy manana hantsana ho an'ny seza misy kodiarana daholo, ary lemaka ny tanàna, ka na manao ahoana na manao ahoana ny fahasalamanao, ho hitanao fa mora dia mandehandeha fotsiny.
Ny 'The Sherre's Last' dia ny Duomo sy Leonardo De Vinci dia manamboatra an'i Milan ho paradisa ho an'ireo tia zavakanto sy tantara. Ankoatra ny maha-marika mpanao maritrano, Milan dia sariaka be amin'ny mpisava lalana zokiolona ary nahazo fandresena a 2016 Fandraisana an'ny EU. Noho izany i Milan dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra hitsidika any Eoropa ho an'ireo mpivahiny zokiolona.
Raha nandalo ny faha-60 taonanao ianao ary vonona hanana fiainana mahafinaritra, dia hanana fotoana tena mahaliana ianao any Milan. The italiana nahandro, ny mahatalanjona trano an'ny Basilicas, fampirantiana zavakanto, ary ny tranom-bakoka dia hahatonga anao hahatsiaro ho mpanjaka. Rehefa ao Milano, tokony hiaraka amin'ny kilasy mahandro pasta ianao satria tsy tara mihitsy hianatra ny làlana soja tonga lafatra mba hahafahanao mamorona la dolce vita any an-trano..
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-travelers/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)